प्रधानन्यायाधीशको प्रश्‍न : जनतामा जान्छु भन्दा पनि तिमी नै सरकार चलाऊ भन्‍ने हो ? – रुपान्तर
मुख्य पृष्ठसमाचारप्रधानन्यायाधीशको प्रश्‍न : जनतामा जान्छु भन्दा पनि तिमी नै सरकार चलाऊ भन्‍ने हो ?
प्रधानन्यायाधीशको प्रश्‍न : जनतामा जान्छु भन्दा पनि तिमी नै सरकार चलाऊ भन्‍ने हो ?
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले जनतामा जाने निर्णयलाई रोक्‍न मिल्छ र भन्‍ने आशयको प्रश्‍न गरेका छन्।
संसद विघटनविरुद्ध परेका १२ वटा रिटउपर संवैधानिक इजालसमा शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ भएपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। रिट निवेदको मागबमोजिम विघटनको निर्णय रोक्‍न अन्तिरिम आदेश शुक्रबार जारी भएन। यसमा बहस र प्रकिया लम्बिने भएको छ।